जाँड खाएर श्रीमतीलाई सेक्स गर्न खोजेपछि…. (भिडियो सहित) !
रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द आउछ भन्ने एक किसिमको भ्रम छ । तर यो एक भ्रम मात्र रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।यौन सम्पर्क गर्दा रक्सी सेवनले अस्थायी रुपमा सकारात्मक परिणाम देखाएपनि दीर्घकालमा यसले नकारात्मक परिणाम देखाउन थाल्ने हुँदा सकेसम्म रक्सी सेवन गरेर यौन सम्पर्क नगर्नु नै राम्रो मानिन्छ ।
रक्सी सेवनबाट निश्चय नै शक्ति पैदा गरेता पनि यसले पुरुष र महिलाबिच हुने भावनात्मक सम्बन्धमा भने कमि ल्याउछ । कसैले भने यौन सम्पर्क गर्नुअघि थोरै रक्सी सेवनले केही मात्रामा लाज हटाएर आफ्नो अगाडि भएको व्यक्तिसँग खुल्न सजिलो बनाउने र रोमान्टिक महशुस गर्न मद्दत गर्छ । जो पुरुष यौन सम्बन्धलाई लिएर नर्भस हुने गर्छन्, उनीहरुलाई यौन आनन्द लिन र शीघ्रस्खलन कम गर्न मद्दत गर्छ । तर, रक्सी नै यसको समाधान होइन थोरै पनि मादक पदार्थ सेवनले अण्डकोषबाट उत्पादन हुने टेस्टोस्टेरोन हर्मोनमा कमी आउँछ । टेस्टोस्टेरोन हर्मोन यौन उत्तेजनाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
त्यसकारण रक्सी सेवनले पुरुषको यौन क्रियाकलापमा असर पार्छ । यौन सन्तुष्टि, यौन उत्तेजना, वीर्य स्खलन र चरम आनन्दमा पनि यसले कमी ल्याउँछ । यौन सम्पर्क गर्नुअघि रक्सी सेवनले विभिन्न जोखिम निम्त्याउने सम्भावना पनि हुन्छ ।उनीहरु यौन सम्पर्क एक व्यवहार हो र जसलाई पूरा गर्नु कर्तव्य हो भन्ने ठान्छन । वास्तममा यौन सम्पर्क एक कला हो । यसमा पारंगत हुनका लागि व्यक्तिले भरपूर माया दिन र लिन जानेको हुनु पर्छ । यौन सम्पर्कलाई शरीरको क्रिया मात्र नठानी परस्पर आत्मियता बाढ्ने क्रिया ठान्न जरुरी हुन्छ । रक्सी सेवन गरेर यौन सम्पर्क गर्नेहरु यौन सम्पर्क मायाको उद्गार र आनन्दको स्रोत हो भन्ने कुरा बिर्सन्छन ।रक्सीले व्यक्तिलाई तत्काल उत्तेजना ल्याउने काम बाहेक भावनात्मक काम गर्दैन । तर कहिलेकाही कामबाट थाकेको अवस्थामा, कामको तनाव भएको बेला वा रमाइलोका लागि थोरै रक्सीले यौन आनन्दमा कमि ल्याउँदैन ।
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:३८ 20/11/2018 by महेश शर्मा